ဒီမိုကရေစီ စွမ်းပကား တပ်မတော်အား: Mitch McConnell Urges Myanmar To Reform Constitution
Posted: 07/24/2014 7:32 pm EDT Updated: 07/24/2014 7:59 pm ED
WASHINGTON (AP) — Sen. Mitch McConnell issuedastrong call Thursday for Myanmar to amend its constitution to allow opposition leader Aung San Suu Kyi to run for president and for the military to submit to civilian rule.
The Senate's Republican leader has for years been the most influential voice in Congress on policy toward the country also known as Burma. A longtime critic of the former ruling junta, he's become supportive of the nation's shift from military rule since 2011.
But inaspeech to the Senate, McConnell, R-Ky., said that reforms in the Southeast Asian nation appear to have stalled, leaving Myanmar's commitment to democracy open to question.
He said failure to amendaconstitutional provision that prohibits those such as Suu Kyi with immediate family members who are foreign nationals would "castapall" over the legitimacy of national elections in late 2015 in the eyes of the international community and members of the Senate.
Suu Kyi's late husband was British, as are her two sons. McConnell said such family ties have no bearing on an individual's fitness for office. He voiced concern that restriction wasn't among the changes being considered byaparliamentary committee proposing amendments to the military-era constitution.
"This provision restricts the ability of the people of Burma, through their representatives, to haveachoice in who can hold their highest office. This is profoundly undemocratic. And it is profoundly undemocratic atatime when Burma's commitment to democracy is open to question," McConnell said.
While McConnell did not threaten the reintroduction of trade sanctions lifted last year, he said it was "hard to see" how remaining sanctions would be lifted unless the eligibility issue was addressed. The U.S. still bans the importation of jade and rubies from Myanmar and blacklists individuals hindering reforms.
His comments come amid growing congressional criticism of Myanmar, including concerns over ethnic conflict, restrictions on civil liberties, and anti-Muslim discrimination.
But McConnell reiterated his support for U.S. military engagement to help train and reform Myanmar's armed forces — which the Obama administration wants but many other U.S. lawmakers oppose — saying it could encourage the nation's powerful military to come under civilian control.
Facing growing international criticism, Myanmar announced Thursday it was allowing international aid organizations to return toawestern region they were expelled from earlier this year after Buddhist mobs disrupted their work helping displaced Rohingya Muslims.
More than 140,000 Rohingya have been living in dirty, crowded camps after their villages were destroyed by mobs. Up to 280 people have been killed, most of them Rohingya, in sectarian violence that began in 2012.
Posted by Job for Myanmar in Thailand at 7/25/2014 12:52:00 PM
ချယ်လှယ်တဲ့ စံနစ်ဆိုးမျိုး ရှိနေရင်
အများပြည်သူတို့ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်
A true story ofaBurmese Ex-Military Engineer
Mitch McConnell Urges Myanmar To Reform Constituti...
တာချီလိတ်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မိန့်ခွန်းရွတ်ြ...
ဂျီဟတ်ကို မြန်မာပြည် ခေါ်မသွင်းမိပါစေနှင့်
ဘင်နဒစ် ရော်ဂျာစ် ရဲ့ သန်းရွှေ
၀င်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေ
အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း(မသဒ္ဓါ၏ ကဗျာများ )
ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဘယ်လောက်ရနေပြီလဲ DVB Debate
Informative Details About The Memory Foam Mattress
ဒီမိုကရေစီ ဖော် ဘားမား
မြန်မာနိုင်ငံ မျိုးချစ်စစ်သည်ဟောင်းများ အစည်းအရုံး
ဆရာဇော်ဂျီ သိတဲ့ သခင်အောင်ဆန်း
ပျံကြ ဝဲကြ၊ ငရဲထသို့
ရွာဦးပိုင်းမှ သင်္ချိုင်းထိ။
ဆန်းမှာဆုံပေါင်း၊ ယောကျာ်းကောင်းတို့၊ ခေါင်းဆောင်သဘော
ကျေးငှက်သံလေးတွေ စိုးစီစိုးစီနဲ့ အရုဏ်ဦးက စတင်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီ
ငါ့မျက်လုံးကို ဖြည်းညင်းစွာ ဖွင့်ဟလို့ မျက်နှာကြက်ကို မော့ကြည့်မိတယ်
သြော်..... ဒီနေ့ ငါ့မွေးနေ့ပဲလေ
ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့သားနှစ်ယောက်လည်း ငါနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တာ
ဒါတွေကို မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း ငါတမ်းတမိနေတာ ဝန်ခံပါရစေ…
ငါ့ရဲ့ဘဝဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းခဲ့တာပါ.
ငါ့ကို ထွေးဖက်ထားတဲ့ ငါတို့အိမ်ဖော်မကြီးမှာလည်း မျက်ရည်တွေဝဲနေလို့ပါလား
ငါတို့ မောင်နှမ သုံးယောက်ကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာ
ဘာလို့ သမီးတို့ကို ထားခဲ့တာလဲဟင်
မေမေက တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ငါ့ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ချိုမြတဲ့လေသံလေးနဲ့
သြော် မေမေ့ကို သံအမတ်ကြီးခန့်လိုက်တယ်. မေမေအဲဒီ့မှာ သွားနေရမှာ.
ငါ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းလေးတွေ ဝေဖြာလို့ ငါချစ်တဲ့ မေမေရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို
မေမေသွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့၊ ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်တွေကို
သမီးရဲ့ ဘဝခရီးတလျှောက်မှာ အောင်ပွဲတွေ အလီလီ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ
ကျောင်းဝင်ခွင့်စာရွက်လေးကို ကိုင်လို့ မေမေ့ဆီကို ငါပြေးသွားခဲ့တယ်.
I'm proud of you honey လို့
အဲဒီ့ညက ငါတို့အိမ်မှာ ပါတီလုပ်ခဲ့ကြတယ်.
သီချင်းတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် သီဆိုကြလို့
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေ ထင်ကျန်နေဆဲပါပဲလေ.....
လေဆိပ်ကို မေမေနဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက လိုက်ပို့တယ်.
Departure gate ထဲမဝင်မီ မေမေက ငါ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်နမ်းပြီး
I believe in you တဲ့
ဝင်ခွင့်သိပ်ခက်ခဲတဲ့ ဒီတက္ကသိုလ်ကို ငါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်
ဖတဆိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အများနဲ့မတူအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့
ငါ့ရဲ့ Host Parents တွေက Lord Gore-Booth တို့မိသားစုပဲ.
သူက ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ သံအမတ်ကြီးလာလုပ်သွားဖူးတယ်
သူ့အိမ်မှာပဲ ငါ့ရဲ့ အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်း မိုက်ကယ့်ကို စတွေ့ပြီး
အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ဦးသန့်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်နေတယ်.
မသန်းအိက ငါ့ကို အလုပ်လျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်
Administrative and Budgetary Questions မှာ
Assistant Secretary အဖြစ်နဲ့ပေါ့.
ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေနဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Volunteer ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်
ဆင်းရဲတဲ့ လူနာတွေကို စာဖတ်ရာမှာ ကူညီနိုင်ဖို့နဲ့
ငါ့အချိန်တွေ ကျပ်တည်းခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ့လူနာတွေအတွက် ရအောင်အချိန်ပေးခဲ့တယ်.
ငါ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေက ဘာလဲဆိုတာကို တစ်ချိန်တည်းမှာ ငါတွေ့ရှိခဲ့တယ်.
မိုက်က ဘူတန်ဘုရင်မိသားစုဝင်တွေကို စာသင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ
Research Officer အဖြစ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်.
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ ငါမြတ်နိုးတဲ့
အဲဒီ့ အချိန်တွေကို ငါအမြဲတမ်းသတိရနေမှာပါ…
ငါ့ကို ငါ့တိုင်းပြည်က လိုအပ်လာရင် အချိန်မရွေး
ငါ့ကို သိပ်နားလည်မှုရှိတဲ့သူကို ငါ့ဘဝရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာ
ငါ့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား
ငါ့နှလုံးအိမ်ထဲကို လောင်းချခဲ့တဲ့ မေမေ့ရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲလေ
ငါဘယ်တော့မှ ဦးကျိုးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး
ငါ့ဘဝမှာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမှုတစ်ရပ်ကို ငါခံစားလိုက်ရတယ်သိလား
အဲဒီ့နေ့က မေမေနဲ့ ငါစကားအကြာကြီးပြောဖြစ်တယ်.
ငါ့ကို စကားတွေ တတွတ်တွတ်နဲ့ မှာနေလိုက်တာ မပြီးတော့ဘူး
ကင်မ်ကို မွေးတယ်. ငါ့ရဲ့ ဒုတိယသားလေးပေါ့
ခုဆိုငါလည်း ကလေးတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မကြီးကို လုံးလုံးဖြစ်နေပြီလေ
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ ငါစာတွေရေးဖြစ်ခဲ့တယ်
ဖေဖေ့ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိနဲ့ Asian Studies စာတမ်းတစ်ချို့ပေါ့
မိုက်ကိုလည်း သူလေ့လာနေတဲ့ Himalayan Studies တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ Visiting Scholar အနေနဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ဂျပန်ပြည်မှာ
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေအတွက် ကျေးဇူးပြန်ဆပ်နိုင်တာ ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိတော့လို့ပါ.
ရေစက်ချနေတဲ့ ငါ့လက်တွေ တုန်နေခဲ့တယ်.
ငါ ရဟန်းဒါယိကာမ ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ..
ကလေးတွေနဲ့အတူတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆင်းမလားပြည်နယ်ကို သွားခဲ့တယ်
မေမေ့ကို ဆေးရုံတင်ထားတာကို သွားပြီး စောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့.
စက်တင်ဘာလထဲမှာ ငါတို့မိသားစုတွေအားလုံး အောက်စဖို့ကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်.
ငါ့ရဲ့ Advanced Degree အတွက်
နောက်တစ်နေ့မှာပဲ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ငါထွက်ခွာခဲ့တယ်
မေမေခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို ငါလဲယူလို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ယူပစ်ချင်လိုက်တာ..
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ နိုင်ငံရေးတွေ စတင်ရှုပ်ထွေးနေတယ်.
ရာဇဝင်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီ အဖသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရယ်
ဒါဆိုရင်တော့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ အသိုက်အမြုံမပျက်
ငါ့တိုင်းပြည် ငါ့လူမျိုးအတွက် ငါ့ရဲ့ပေးဆပ်မှု အခန်းကဏ္ဍ စတင်ခဲ့ပြီ
သူတို့ ငါ့ကိုလိုအပ်နေပြီလို့ ငါခံစားရတယ်.
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ပြည်သူတွေအတွက်၊ ငါချစ်တဲ့ ငါ့နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ငါချစ်တဲ့
ငါမြန်မာပြည်မှာ နေပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားမယ်.
NLD ကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှာ စတည်ထောင်တယ်.
ဂန္ဒီရဲ့ အဟိံသလမ်းစဉ်ကို ငါစွဲမြဲစွာ ယုံကြည်ခဲ့တယ်လေ
စစ်ဘီလူးရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို အကြမ်းမဖက်အနုနည်းနဲ့ ခွာချပြနိုင်ခဲ့တယ်.
တည်ငြိမ်စွာနဲ့ သူတို့ဆီကို ဦးတည်ပြီးလှမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်
သူတို့ကြားထဲက ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ငါ့ကို
ကောင်းကင်ဘုံက လက်ကမ်းကြိုဆိုနေမယ်လို့ သမီးခိုင်မာစွာယုံကြည်နေပါတယ်.
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်
မေမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ မနည်းဘူးမေမေရယ်.
မေမေ့ကို သဂြိုဟ်တဲ့နေ့မှာပဲ မေမေ့ရုပ်ကလာပ်ရှေ့မှာ
ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် သေသည်အထိ ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး
ဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင် သမီးဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါ့မယ်
ငါတို့ NLD ပါတီ
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကျုံးမဝင်ပါဘူးလို့ ဗြောင်ငြင်းတယ်.
အဲဒီ့ကတည်းကပဲ ငါ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်၊ အကျယ်ချုပ်ပြန်ချလိုက်နဲ့
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတွေနဲ့ ငါ့နာမည်ကို
Prospect Burma ဆိုတဲ့ NGO အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး
မေမေက ကိုယ်ကျိုးရှာသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သားတို့အသိဆုံးပါ
သားတို့ကို ပစ်ထားချင်လို့ ပစ်ထားတာမဟုတ်ရပါဘူး
သားတို့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေထက် နိမ့်ကျနွမ်းပါးနေတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုကို
သားတို့အပေါ် ဂရုမစိုက်မိခဲ့တာတွေကို နောင်ဘဝဆိုတာတွေမှာ ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်
အတိုးချပြီး ပြန်ပေးဆပ်ပါမယ် သားတို့ရယ်......
၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ၃ဝ ရက်
ဆိုတဲ့ စစ်ဘီလူးရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ်တွေအောက်မှာ
တိုင်းပြည်ရဲ့ အညွှန့်အဖူးလေးတွေ လွင့်ကြွေခဲ့ရရှာပြီ…
အဲဒီ့ညက ကောင်းကင်ပြာကြီးမှာတောင် သွေးရောင်တွေလွှမ်းနေခဲ့တယ်.
ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်လိုက်တာ ချစ်သားချစ်သမီးတို့ရယ်..
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို ဘယ်ဘဝမှာမှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့နိုင်ကြပါစေနဲ့တော့လို့
ငါ့ကို ပြန်လွှတ်ရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်မျှော်နေသူတွေလည်း
မျက်စိကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်ပြီး တရားစီရင်ချင်သူတွေရဲ့ အတ္တများအောက်မှာ
အမှန်တရားက ကမ္ဘာကိုပတ်ဖို့ သူ့ဖိနပ်လေး လိုက်ရှာနေတုန်းပဲ
နွေမိုးဆောင်းပေါင်းများစွာလည်း ငါ့ခြံဝင်းထဲမှာ ကျရောက်ခဲ့ပြီ
ငါ့သားတွေလည်း အိမ်ထောင်ရက်သားကျသူကျနဲ့ အခြေကျကုန်ပြီ
ကုတင်တိုင်ကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အားယူလို့ ငါထလိုက်တယ်
ရေဒီယိုထဲက ဆုတောင်းသံတွေ တစ်သဲသဲနဲ့ ဝင်လာမစဲဖြစ်နေတယ်.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ.. ချမ်းသာပါစေ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ.. ချမ်းသာပါစေ.. တဲ့..
ကျလုဆဲဆဲ မျက်ရည်တစ်ချို့ကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး
ငါ့ရဲ့ အေးမြတဲ့ အပြုံးအောက်မှာ ခက်ထန်တဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝလေး တိုးလျှိုးလို့
အသက်နဲ့ ဘဝကိုပါ ပေးလှူထားတဲ့ အာဇာနည်မိန်းမပါ.
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အမှောင်ကိုဖျောက်လို့ အလင်းနေ့သစ်များကို
ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်အမျိုးကောင်းသား ရဟန်းရှင်လူများ
(အထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ မှ ကျောင်းသားများ)
အဲဒါ ... “အောင်ဆန်း” တို့၊ “ကျော်ငြိမ်း” တို့၊
“သိန်းဖေ” တို့၊ “ညိုမြ” တို့ရဲ့
ကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့ သဏ္ဍန်သာ ဖြစ်တယ်။
တာရာမင်းဝေ (ခ) ချစ်ညီညီ (ခ) ရွှေဘုန်းလူ
ဖရီးဒေါင်းလုဒ် မြန်မာ အီးဘွတ်(က်)
မြန်မာ အီးဘွတ်(က်) များ
မြန်မာနိုင်ငံ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ 
မြို့ကြီးများရဲ့ (၇) ရက်ကြိုတင်ခန့် မှန်းချက်
မက် (ဒ်) ဖန်